Suugaanta Taz Bolingo: Miyaad xusuusantahay tan orodka Taz Bolingo? Halkee ayay tageen? Dumarku waxay marwalba door muhiim ah ka ciyaaraan warshadaha muusikada adduunka ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 29, 2020 00: 10 No Comments
Waxay gacan ka geysteen qaabeynta heesaha qarsoodiga ah ama heesaha heesaha si loogu ammaano Ilaah. Heesidda heesaha oo ka mid ah rabshadaha qoyska ilaa cilaaqaadka jacaylka, caddaalad darrada bulshada ee ku xadgudubka carruurta, iwm.
Waxaa ka mid ah kooxo fara badan oo dunida ka dhigay muusikada mid qurux badan, waxaa jiray koox ka kooban "haweenka, muusikada". Waxaa loogu yeeri jiray "Taz Bolingo Orchestra", oo xaruntiisu tahay Kinshasa / Zaire (maanta DR Congo). Waxaa la abuuray horaantii 80naadkii, laakiin ma sii dheerayn caqabado gudaha ah awgood.
Mar labaad sanadkii 1988, koox haween saxafiyiin ah oo ku sugan Kinshasa ayaa dib u soo nooleeyay oo ciyaaray noocyo badan oo Soukous ah. Sida wixii ku dhacay xubnihii hore, kalsooni darro ayaa la dejiyey, eedeymaha xatooyada ninka iyo saaxiibka, qeybinta aan sinneyn ee faa'iidooyinka la soo aruuriyay, iwm. Waxay noqotay muuqaal caan ah.
Tani waxay keentay in xubnaha qaar is casilaan; ka dib kooxdii ayaa mar kale dumisay. Hoosta, muuqaal fiidiyow ka mid ah riwaayadoodii.
Sep29 03: 45